पुर्णकला र लोकबहादुरको माया ‘ढाटेको होइन’ बोलको गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित)
काठमाडौं । नेपाली गीत संगितका सष्टा तथा सर्जकहरुको मौलिक भाकाहरुलाई गीत संगितमा ल्याएर आफना श्रोता तथा सुभचिन्तकहरु माझँमा पुर्याएर नेपाली कला र संस्कृतिको विकाशमा टेवा पुर्याउँदै आएको विन्ध्यवासिनी म...
राज के गोस्वामीको रंग बिनाको होली सार्वजनिक
काठमाडौं। गायक राज के गोस्वामीको गीत रंग बिनाको होलीु सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार युट्युब च्यानलमार्फत उक्त गीत सार्वजनिक गरिएको हो। गीतमा किरण भण्डारीको शब्द संगीत रहेको छ। गीतको एरेन्ज पनि किरणले ...
“भुल भए माफ गर”अंशु गीति एल्वम सार्वजनिक
काठमाडौं। भर्खरै मात्रामा बजारमा आएको गितकार डिल्ली चन्दको शब्दमा रहेको नयाँ भुल भए माफ गर अंशु गीति एल्बमको आधुनिक गितको म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ । त्रिकोणात्मक प्रेम तथा यलभ कष्मभ यिखभ कतयचथ ...
विवाहमा प्रेमले अञ्जलीलाई ‘आँशु झार्न दिन्न’ भनेपछी (भिडियो सहित)
काठमाडौं । नेपालीहरुको मौलिक भाकाहरुलाई गीत संगितमा ल्याएर आफना श्रोता तथा सुभचिन्तक हरु माझँमा पुर्याउने नेपाली कला र सस्कृतिको विकाशमा टेवा पुयाउने क्रम जारी रहेको छ । विभिन्न चाडपर्व विवाह समारोह ...
‘फुल्यो फुल सिस्नु सेतै गीत सार्वजनिक’
काठमाडौं । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा प्रतिभाशाली कलाकारको गायकमा लोक संगितमा क्रियाशिल गायिका मुना थापा मगर र कमल विरहीको सुमधुर आवाजमा गित रहेको छ । ‘फुल्यो फुल सिस्नु सितै’ बोलको गीतमा माया का चो...
डेढ करोडको लागतमा बनेको पञ्चेबाजा कस्तो होला ? (हेर्नुस् भिडियो)
पोखरा । दर्शकलाई मनोरञ्जनको ‘शतप्रतिशत ग्यारेन्टी’ दिने दाबा गर्दै फिल्म पञ्चेबाजाको यूनिटले प्रचारप्रसारलाई तिव्रता दिएको छ । फागुन ११ गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउने फिल्म पञ्चेबाजाको प्रचार अभियान...
चलचित्र ‘नेप्टे’को टाईटल गीत ‘दिल रानी’ तयार
काठमाडौँ । चलचित्र ‘नेप्टे’को टाईटल गीत ‘दिल रानी’ तयार भएको छ । गीतमा उदितनारायण झा र सेलिना कुँवरले स्वर दिएका छन् । यमनाथ मैनालीले लेखेको गीतमा सन्तोषराजले संगित भरेका छन् । रोहित रुम्बाले निर्माण...
आमिर खानले रानीसंग यसकारण माफि मागेका थिए
काठमाडौं । करिव चार वर्षपछि फिल्म हिच्किबाट पर्दामा कमव्याक गर्दै अभिनेत्री रानी मुखर्जीलाई पहिलोपटक बलिउडमा इन्ट्री गर्दा उनको आवाज कारण निकै संघर्ष गर्नु परेको थियो । उनको आवाज एउटी स्त्रीको भन्दा प...
शिव लामिछानेको ’जय नेपाल’ गीत सार्वजनिक
काठमाडौं। गायक शिव लामिछानेको गीत ’जय नेपाल’ सार्वजनिक भएको छ । चाहे माया गर,किन दुख्छ मुटु मेरो लगायतका गीत मार्फत चर्चामा आएका गायक लामिछानेलाई शिवाजको नामले सांगीतिक दुनियामा चिन्ने गरिन्छ । उनले ...
‘मिस्टर भर्जिन’मा समावेश टुल्की बोलको गित सार्वजनिक (अडियो सहित)
काठमाडौं। चलचित्र ‘मिस्टर भर्जिन’मा समाबेश टुल्की बोलको गीतको अडियो सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त अडियो गीत वोर्ल्ड वाइड फिल्म्स डिस्ट्रिव्यूसनको युट्युब च्यानल मार्फत सार्बजनिक गरिएको हो । टुल्कीमा सुरज...
पामिरले जित्यो रिसन डान्स आइडल २०७४ को उपाधि
रुपन्देही । बिद्यार्थीको अन्तरनिहित प्रतिभाको प्रष्फुटन गर्ने उदेश्यले रुपन्देही एकीकृत बिद्यालय संगठन नेपाल रिसनको आयोजनामा रिसन डान्स आइडल २०७४ सम्पन्न भएको छ। रिसनका अध्यक्ष मधुप्रकाश ज्ञवालीको ...
कलाकार जलजललाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौँ । ‘सुन्दर मनहरूको फूलबारी’ फेसबुक ग्रुपले देश तथा विदेशमा रहेकाहरुबाट सहयोग संकलन गरेर १ लाख ८३ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ कलाकार जलजला परियारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । अनिल बुढा (मास्टर काका) को स...
पोखरा। देश भरिको हलमा ७ दिनको फरकले प्रदर्शनमा आएको चलचित्रहरु कृ र कान्छी यति बेला नेपाली सिने जगतमा प्रतिष्पर्धामा रहेका छन्। दर्शकहरुले यी दुवै चलचित्र हेरी सके पछि विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरु दिई ...
सपनीमा आउनेलाई सम्हालेर राख्दै प्रियंका (भिडियो सहित)
काठमाडौं । नायिका प्रियंका कार्की अभिनित नयाँ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘सपनीमा आउनेलाई’ बोलको गीतमा प्रियंका कार्की ६० जना कोरसको बीचमा देखिएकी छिन् । मेलिना राईको स्वर रहेको गीतमा दिपेन्द्रनाथ...
निरजको ‘असारे झरीमा’ कृष्ण र हेमंताको रोमान्स (भिडियो सहित)
सिड्नी अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा बसोबास गर्दै आएका गायक निरज खरेलको ‘असारे झरीमा’ बोलको गीत बुढा सुब्बा डिजिटलको यूटुब च्यानल मार्फत रिलिज गरिएको छ । थंडरस्टोर्म रेकर्डसद्वारा प्रस्तुत गरि...
इन्दिरा र दिनेशको ‘रात्रि बस’ (भिडियो सहित)
विराटनगर । नेपाली लोकदोहोरीको क्षेत्रमा मौलिक भाकाका साथै जिवन भोगाइका क्षणहरु समेटिका लोकभाकाको आगमनको क्रम बढदो मात्रामा रहेको छ । काठमाडौंको रात्री बसको खासै भरोसानै हुदैन समयमा गन्तव्यमा पुग्न गा...
क्यान्सर बिरामीको सहयोगार्थ ‘ऐ मेरो हजुर–२’ डिसीमा प्रदर्शन हुने
वाशिंगटन डिसी । अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका नायिका तथा निर्देशक झरना थापा तथा निर्माता सुनिल कुमार थापाको ‘ऐ मेरो हजुर–२’ डिसीमा प्रदर्शन हुने भएको छ । नेपालमा चलचित्र निर्माण गरे पछि युरोपका विभिन्न देश...
बलिवुडका यी चर्चित कलाकार जसले ‘भ्यालेन्टाइन डे’ को दिन बिहे गरे
मुंबई । १४ फेब्रुवरी आम मानिस सहित विभिन्न सेलिब्रेटी सबै भ्यालेन्टाइन डे मनाउँछन् । यो दिन प्रेम गर्नेहरुका लागि विशेष दिन मानिन्छ । आज हामी बलिवुडका यस्ता हस्तिहरुका बारेमा जानकारी दिने छौं । जसले ठ...
प्रणय दिवसमा माया लाउने !
काठमाडौँ । प्रणय दिवस अर्थात भ्यालेन्टाइन्स डे को अवसर पारेर गीतकार एवं पत्रकार शान्तिप्रियले म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । माया लाउने यहि ज्यान हो... बोलको गीतलाई गायक गणेश श्रेष्ठको जन्मदिन स...
मोडल र गायिकाको ‘भ्यालेन्टाइन डे’
काठमाडौँ । खासगरी पश्चिमा देशहरूमा मनाइदै आएको ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थाथा प्रणय दिवस केही वर्षदेखि नेपालमा पनि विशेष रुपमा मनाउन थालिएको छ । उपहार तथा प्रेम साटासाट गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ । ‘भ्यालेन...